2 Tantara 24 - Ny Baiboly
2 Tantara toko 24
Joasa mpanjakan'i Jodà - Ny nanamboarana ny tempoly - Ny nahafatesan'i Joiadà - Ny niverenana tamin'ny fanompoan-tsampy - Ny nitoraham-bato an'i Zakaria, zanak'i Joiadà - Tafiky ny Siriana - Ny namonoana an'i Joasa.
1Efa fito taona Joasa fony vao nanjaka, ary efapolo taona no nanjakany tao Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Sebià avy any Bersabea. 2Nanao izay mahitsy eo imason'ny Tompo Joasa tamin'ny andro rehetra niainan'i Joiadà mpisorona. 3Roa no vady nalain'i Joiadà ho an'i Joasa ary niteraka zazalahy aman-jazavavy izy.
4Tatý aorian'izany, nanam-pahazotoana hanamboatra ny tranon'ny Tompo Joasa. 5Ka namory ny mpisorona sy ny Levita izy dia nanao taminy hoe: Mandehana hianareo any amin'ny tanànan'i Jodà, ka mamoria vola isan-taona amin'Israely rehetra hanamboarana ny tranon'Andriamanitrareo, ary ataovy faingana izany. Nanao tsy rototra anefa ny Levita, 6ka nantsoin'ny mpanjaka Joiadà mpisorona lehibe, nilazany hoe: Ahoana no tsy nikarakaranao izay hitondran'ny Levita avy amin'i Jodà sy Jerosalema ny hetra nasain'i Moizy mpanompon'ny Tompo sy ny fiangonana, haloan'Israely ho an'ny trano lain'ny vavolombelona? 7Fa efa nosimbain'i Atalia mpankahala ny fivavahana mbamin'ireo zanany ny tranon'Andriamanitra, ary efa nentiny hatao amin'ireo Baala ny zavatra rehetra voatokana ho an'ny tranon'ny Tompo. 8Ny mpanjaka tamin'izay dia nandidy olona hanao vata ary nasainy hapetraka teo am-bavahadin'ny tranon'ny Tompo, eo ivelany izany. 9Ary naely eran'i Jodà sy Jerosalema fa isan'olona dia tsy maintsy mitondra ho an'ny Tompo ny hetra nodidian'i Moizy mpanompon'ny Tompo haloan'Israely, tany an'efitra. 10Nahafaly ny lehibe rehetra sy ny vahoaka rehetra izany, ka samy nanatitra izay rehetra tsy maintsy aloany avy izy, sy nandatsaka izany tao amin'ilay vata. 11Amin'ny fotoana hanolorana ny vata amin'ny mpikarakaran'ny mpanjaka amin'ny alalan'ny Levita, dia amin'izay ahitan'ny Levita fa efa be ny vola, dia tonga ny mpanoratry ny mpanjaka sy ny mpanao raharahan'ny mpisorona lehibe manesotra izay rehetra ao anatin'ny vata; alainy ny vata dia averiny ao amin'ny fitoerany indray. Nanao toy izany mandrakariva izy, ka nahavory vola betsaka. 12Dia nomen'ny mpanjaka sy Joiadà an'ireo mpampanao ny asa amin'ny tranon'ny Tompo ny vola, ary nanakaraman'izy ireo mpipai-bato amam-pandrafitra hanamboatra ny tranon'ny Tompo mbamin'ny mpanefy vy amam-barahina hanamafy ny tranon'ny Tompo. 13Ka niasa ny mpiasa, ary tao an-tànany dia nandroso ny fanamboarana ny trano, ka tafaveriny amin'ny toetrany taloha ny tranon'Andriamanitra sy nohamafisiny. 14Nony vita ny asa dia nentiny teo anatrehan'ny mpanjaka sy Joiadà ny vola sisa ka nanaovana fanaka ho an'ny tranon'ny Tompo, dia fanaka ho enti-manao ny fanompoana sy ny sorona dorana, kopy mbamin'ny fanaka volamena amana volafotsy sasany, ka tsy tapaka fanateran-tsorona dorana tao an-tranon'ny Tompo tamin'ny andro rehetra niainan'i Joiadà.
15Tratra antitra sy voky andro Joiadà, ka dia maty; efa telopolo amby zato taona izy, vao maty. 16Tao amin'ny mpanjaka, ao an-tanànan'i Davida izy no nalevina, fa soa no nataony tamin'Israely sy ho an'Andriamanitra mbamin'ny tranony.
17Nony maty Joiadà tonga niankohoka teo anatrehan'ny mpanjaka, ny lehibe tamin'i Jodà, ka nihaino azy ireo ny mpanjaka, 18dia nandao ny tranon'ny Tompo Andriamanitry ny razany izy ireo, ary ny aserah mbamin'ny sampy no nomeny voninahitra. Tratry ny fahatezeran'ny Tompo anefa Jodà sy Jerosalema noho izany fivadihana izany. 19Naniraka mpaminany tany amin'izy ireo Iaveh hampiverina azy ireo aminy indray, ka nitsangana ho vavolombelona nanohitra azy ireo ireny, nefa tsy nohenoiny.
20Notsindrian'ny fanahin'Andriamanitra Zakaria, zanak'i Joiadà mpisorona, ka nankeo anatrehan'ny vahoaka nilaza taminy hoe: Izao no lazain'Andriamanitra: Ahoana no andikanareo ny didin'ny Tompo, tsy hahazoanareo fanambinana? Noho hianareo nahafoy an'ny Tompo, dia mba hafoiny koa. 21Ka niray tetika hamely an'io izy ireo, ka nitora-bato azy, dia teo amin'ny kianjan'ny tranon'ny Tompo noho ny didin'ny mpanjaka. 22Tsy tsaroan'i Joasa ny fitiavana nataon'i Joiadà rain'i Zakaria, taminy, ka nampamono an'ity zanany izy. Hoy Zakaria nony efa ho faty: Hijery sy hamaly an'izao anie Iaveh!
23Nony niherina ny taona, niakatra hamely an'i Joasa ny tafiky ny Siriana ka dia tonga tany Jodà sy Jerosalema izy. Namono ny lehibe rehetra teo amin'ny vahoaka izy ireo, sy nampitondra ny babo azony rehetra ho any amin'ny mpanjakan'i Damasa. 24Miaramila vitsy no teo amin'ny tafiky ny Siriana, nefa miaramila maro be no natolotry ny Tompo ho eo an-tànany, satria izy ireo nahafoy an'ny Tompo Andriamanitry ny razany. Nanefa ny fitsarana namely an'i Joasa ny Siriana. 25Nony nilaozan'ireny, ka efa feno ratra maro izy, dia nanaovan'ny mpanompony teti-be hasiana, noho ny amin'ny ran'ny zanak'i Joiadà mpisorona, ka novonoiny teo am-pandriany, dia maty. 26Ireto no nanao teti-be hamely azy: Zabada, zanak'i Semaata vehivavy Amonita, sy Jozabada, zanak'i Samarita vehivavy Moabita.
27Ny amin'ny zanany, ny faminaniana maro namely azy, ny nanamboarany ny tranon'Andriamanitra, dia indro fa efa voasoratra ao amin'ny Fitadidiavana momba ny bokin'ny Mpanjaka. Amasiasa zanany no nanjaka nandimby azy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0067 seconds